Linux: "Egwuregwu karịrị" | Site na Linux
Mike Gualtieri, onye bụ akụkụ nke otu nchọpụta Forrester, kwuru n'oge na-adịbeghị anya Atụmatụ Linux weghara ụwa okpu: "egwuregwu karịrị."
"Ọ lụrụ ọgụ ike ka ọ chịwa ụwa," o dere n'akwụkwọ ozi edepụtara nke ọma Mobile Mgbasa Egburu Linux Maka Olileanya Dominwa (la mmụba nke ngwaọrụ mkpanaka emeela ka atụmanya nke Linux achịkwa ụwa). "Ọ bụ obere ihe mepere emepe nwere ike ịbụ, mana ọ bụghị".
Iji kwado nkwupụta ya, ọ hotara ọnụ ọgụgụ oyi nke dị n'okpuru 2% iji Linux na kọmpụta desktọọpụ ha; a eziokwu na-na-kawanye njọ site ewu ewu na Linux na ụwa nke mobile ngwaọrụ.
Site na ntinye aka ya na nka nke trolling, Gualtieri mechiri ederede ya site n'ikwu:
Isi mmalite emegheghi ihe ọ bụla. Kama nke ahụ, ọ na - arụ ọrụ dị ka ntụgharị ọnụ ahịa maka teknụzụ ndị edobere.
Ihe nde kwuru nde dollar bụ gịnị kpatara Linux ejighi ike idozi onwe ya na PC PC desktọọpụ ebe ọ nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na ngwaọrụ ndị ọzọ? Nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ dịka Google? Ihe isi ike teknụzụ na-eme ka PC PC desktọọpụ dị mgbagwoju anya? Ahịa ekwentị mkpanaaka ọ dị ọhụụ ma ọ bụ ya mere sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ ji enwe ohere karịa? Ọ bụ nsogbu siri ike na PC desktọọpụ nke Windows na-arụnyere na ndabara?
Enwere ihe mkpuchi ọlaọcha nke ndị na-anụ penguin nwere ike 'tinye na'? Torvalds n'onwe ya na-eme.
Ozi ọma, echere m na ọ bụ, ruo n'ókè ụfọdụ, ahịa desktọọpụ na-agbada (…) Taa, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ha site na ihe nchọgharị ahụ.
Eziokwu. Anyị bụ ndị nọ na nke a afọ ole na ole achọpụtala mgbanwe Torvalds kwuru. Inwekwu oge na ihe nchọgharị na òké ahụ, na-emebi ihe ọ bụla.
Ka anyị chee… kamera maka nzukọ vidio? Ọtụtụ mobiles kwere ha; gee egwu? Na mp3 Player anyị zuru; lelee ihe nkiri? Site na ihe nkesa multimedia anyị nwere ike ijikwa; You na-ebudata p2p? Ihe nbudata ihe nbudata na PC ochie ga-enyere anyị aka. Na nkenke, azịza anyị nwere, nke na-ewepụ anyị na desktọọpụ, na-abawanye.
Isi: OMG! Ubuntu & Mpaghara Linux
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Linux: "Egwuregwu karịrị"
Jonathan Korea dijo
Ok kwanye onodu gi ugwu
Zaghachi jonathan coreas
Ma ọ bụ wụnye ubuntu, dịka ịchọrọ, ikpe ahụ bụ na Windows ma ọ bụrụ na ị wụnye ya mgbe ị wụnye ubuntu na-agbawa Grub nke bụ njikwa buut nke Ubuntu rụnyere iji nwee ike ịme boot abụọ.
Windows, dịka ha si dị mma, ga-agbapụ gị ma kwe ka Windomierda bido.
M na-eji windo maka mmemme abụọ, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị wụnye ubutnu na akụrụngwa gị na Ubuntu ị wụnye mmemme Virtualbox, ị nwere ike ibudata ya http://www.virtualbox.org site na mmemme a ị nwere ike ịmepụta sistemụ arụmọrụ dị mfe ebe ị wụnye windo dịka ọmụmaatụ na 10 gb wee bido windo n'ime Linux, ọ na-aga n'ihu na ihuenyo na ihe niile ma echere m na ọ na-agbakwa ọsọ ọsọ.
Ọ bụ njakịrị kacha mma m gụrụ n’izu.
"Youkwesighi ịbụ nọmba 1 ka ị bụrụ onye kachasị mma."
Miquel Mayol na Tur dijo
Ha na-eti mkpu, mgbe ahụ anyị na-agba ịnyịnya
Linux bụ onye ndu site na kọmputa akpa - nke pere mpe - na sava, nke kachasị.
O nwere egwuregwu ole na ole, ugbu a, o nwere flash na androids.
Ọbụna ọ na-enwe mmeri na PCTV
Otutu n'ime uta maka mmeri ya na nix ya bu ogwe aka. Ebe o na egosi karia nke ahu ka nma.
Ma GoogleTV ma gam akporo ga-abawanye ojiji ya.
Na desktọọpụ, agha ahụ efughi, ọ na-achọ ịgbada ihu, Ndị Ọha na Ọha na nnukwu ụlọ ọrụ na-abawanye na Linux ma mepee ngwanrọ, ọ nweghị ihe ọ bụla MS na-enye MS Office ozugbo ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ kwagara Relọ ọrụ Libre, maka ihe kpatara ya.
Chrome OS na-ahapụ ndị ọrụ ole na ole ya ka afọ ojuju, na Ubuntu amalitelarị ka erere ya na ATOMs, ihe nhazi dị ọnụ ala nke nwere MS WOS na-arụ ọrụ nke ọma, yana Linux ọ na-aga nke ọma na nke TIZEN na-eme Linux ọzọ. ahaziri ya maka ya E wezụga, Ubuntu maka ARM dị ka nnukwu nzọ maka ọdịnihu.
Ọ bụ ya mere ugbu a a na-ekwu maka "ọnwụ nke Linux" naanị mgbe onye nwụrụ anwụ a ka dị ndụ
PS1: Naanị ihe nwere ike igbu Linux bụ kernel ọzọ mepere emepe dị ka Hurd karịrị ya, mana Hurd ka nwere ọtụtụ ọrụ ọ ga - arụ, ọ gaghị abụ mmeri nke Linux, kama mmalite nke ngwanrọ GNU.
PS2 Na m obi umeala blog kacha gaa ntinye bụ vidiyo na otu esi etinye Ubuntu dị ka ngwa na android
Zaghachi Miquel Mayol i Tur
Na 13/11/2011 11:46, «Disqus» <>
Ihe ị ga-anụ ... Echere m na echiche Mike Gualtieri nwere mmasị ma ọ bụ ọnọdụ site na onye na-enweghị mmasị na ihe ịga nke Linux, n'ihi na ọ bụrụ na ị ghọtaghị nnukwu okwu nzuzu o kwuru.
Daalụ Arnold. Ì chere na nke a distro ga-edozi nsogbu na BIOS bụ Efi na naanị buut mbụ sistemụ arụnyere? Nke doro anya na mmeri 7 ...
Okwu gị bụ ezigbo ngosipụta nke ihe kpatara Linux enweghị ihe ịga nke ọma kwesịrị na kọmputa kọmputa. You nwara itinye Ubuntu na kọmputa gị nke arụnyere Windows ma ị na-eme mkpesa na ị nweghị ike. Ọ bụrụ n ’kọmputa gị tinyegoro Ubuntu na onye na-ere ya kwadoro ya, ihe ị ga-eme mkpesa banyere ya bụ na ịnweghị ike iwunye Windows, nke ahụ bụ ihe dị iche.
Companieslọ ọrụ ndị a na-ere kọmpụta na-eji Windows arụ ma ha achọghị inyere gị aka na ya mana ha anaghị ere Ubuntu kọmputa maka na ha achọghị ka enyere gị aka.
Akwụkwọ ikike ikikere Echiche